बलिउडका तीन खान: कसको कमाइ कति? | Neptoday
बलिउडका तीन खान: कसको कमाइ कति?
एजेन्सी: बलिउडमा सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खानलाई सुपरस्टारको रुपमा चिनिन्छन्। उनीहरुको कुनै पनि फिल्‍मले बलिउडको बक्स अफिसमा कब्जा जमाएकै हुन्छ, यसकारण उनीहरु बलिउडमा सफल मानिएका कलाकारमा मानिएका हुन्। अधिकांश मानिसहरुले मनपराएको तीन खानको कमाइ पनि निक्‍कै धेरै हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। कति छ त उनीहरुको कमाइ ?
सुपरस्टार सलमान खानले पहिलो फिल्‍म सन् १९८८ मा ‘बीबी हो तो ऐसी’ मा पहिलो पटक अभिनय गरेका थिए। तर उनको पहिलो फिल्म नै फ्लप भयो। यो फिल्‍मपछि सलमान खानले ‘मैने प्यार किया’ मा खेलेपछि सुपरडुपर हिट भयो।
यो फिल्‍मले बलिउड उद्योग नै उकासिदियो। यसपछि उनी बलिउडमा जम्न थाले। उनको एकपछि अर्को गर्दै ‘हम आप के कौन है’ करण अर्जुन, साजन ९० को दशकमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्‍म नै बन्यो।
तर उनका केही फिल्‍मले नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो जसले बलिउडको बक्स अफिसमा अरुको रजाइ चल्यो। तर पछिल्लो समय सलमानले ‘सुल्तान’ ल्याएपछि बलिउड बक्स अफिसमा ३ सय करोड ककमाउन सफल भयो।
सलमानले अहिलेसम्म बलिउडमा करीब ७० वटा फिल्‍मबाट लगभग २ हजार ८ सय ३० करोड कमाइ सकेका छन्। जसमा दबङ, बडीगार्ड, एक था टाइगर, सय करोड क्लबमा थियो। यस्तै उनको किक, प्रेम रतन धन पायोले २ सय करोडमाथि माथिको कमाइ गरेको थियो।
बलिउडमा किङ खानको नामले चर्चित शाहरुख खान धेरैले मन पराएको अभिनेतामा पर्छ। शाहरुखको रा वन, जब तक है जान, डन २, चेन्‍नइ एक्सप्रेस, दिलवाले, ह्यापी न्यू इयर लगायतका फिल्‍मले सय तथा दुई सय करोड क्बलमा प्रवेश गरिसकेका हुन्।
पछिल्लो समय उनको रइसले अहिलेसम्म १३९.२१ करोडको कमाइ गरेको छ।शाहरुखले अहिलेसम्म करीब ६० वटा फिल्‍मबाट बक्स अफिसमा २ हजार १ सय २६ करोड कमाइ सकेका छन्।
मिस्टर परफेक्टको नामले बलिउडमा चिनिएका आमिर खानको वर्षमा एउटा नयाँ फिल्‍म आउने गर्छ। तर उनको जुनै फिल्‍म आए पनि कमाइ भने करोडमै हुने गरेको छ।
सन् २००१ देखि सन् २००५ सम्म उनले एउटा पनि फिल्म खेलेनन्। तर पनि उसले फिल्‍मको बक्स अफिसमा सय करोडको कब्जा कायम राखे। उनीद्वारा अभिनित फिल्‍म ‘पीके’ होस वा ‘गजनी’। सबैले मालामाल पैसा कमाइ गर्यो। भर्खै उनले ल्याएको फिल्‍म दंगलले पनि बक्स अफिसमा ३ सय करोडमा रेकर्ड राख्‍न सफल भयो।
उनले सन् १९७३ देखि फिल्‍म ‘होली’ बाट कलियर सुरुवात गरेका हुन्। होली त्यतिबेला खासै चलेन्। यसपछि उनले ‘कयामत से कयामत तक’ सन् १९८८ मा काम गरे। जसले ४.५ करोडको कमाइ गर्‍यो। उनको त्यो फिल्‍मले गायक उदित नारायण झाको जीवनमा पनि नयाँ उचाइ दिलाउन सफल भयो।
उनले अहिलेसम्म बलिउड बक्स अफिसमा करीब ४० फिल्‍म खेलिसकेका छन् भने करीब १ हजार ६ सय २३ करोड कमाइसकेका छन्।